दलित समुदाय कहिले मानव बन्ने ? « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » दलित समुदाय कहिले मानव बन्ने ?
दलित समुदाय कहिले मानव बन्ने ?
२०७३ पुस ५, जागरण मिडिया सेन्टर
पुर्ण वहादुर विक ,पहाडी
२१ औ शताब्दीमा पनि मानव जातिको एक हिस्सा पशु सरहको जीवन जिउन बाध्य छन् । त्यसको दोष अरु कोही नभएर मानव जातीको नै छ । मानवले मानव माथि गर्ने अन्याय, अत्याचार दमन , हिंसा , धर्मको आधारमा गरिने एक प्रकारको शासन , अन्धभक्तहरुको लाजमर्दो अमानवीय व्यवहार हो ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने त झन् मानव, मानव बीचको अन्तर यहाँ सम्म छ कि बरु पशुको इज्जत र सम्मान छ तर मानवको छैन । प्रसङ्ग लक्ष्मी परिवारको घटनाको हो । के लक्ष्मी मानव होइनन् , के ऊनी समाजमा मानवीय परिवेशमा हुर्केकी होइनन् ?मानवीय समाजमा हुर्केको लक्ष्मी परिवारले आज त्यही समाजमा पशु सरहको मृत्युवरण गर्न पुगिन् । अन्धविश्वास बोक्सीको आरोपमा एक मानवलाई पशु जसरी कुटपिट गरि हत्या गरियो , त्यो पनि समाजको बारेमा सामाजिक पढाउने शिक्षक बाट नै ।
हत्या भएको पनि हप्तौं बित्न लागी सके तर सरकार , मानव अधिकारकर्मीको काम कारबाही कहाँ पुग्यो ? यस्तै हो भने अबको दिनमा मानवले मानव माथि गर्ने अन्याय ,अत्याचार झनै बढेर जाने कुरा निश्चित छ । यो समाजमा अमानव पशु भएर बसेका हामी दलित समुदाय ,अब कहिले मानव बन्ने , मानव पशुबाट वास्तविक मानवमा कहिले हुने ? हामी आफै बन्ने कि अरुको गुलामी गरेर मानवको भिख माग्ने, प्रश्न यहाँ निर छ । मैले मात्र लक्ष्मी परिवारको कुरा गर्न खोजेको छैन , नेपालमा रहेका समग्र ६० लाख दलित समुदायको बारेमा हो ।
लक्ष्मी परिवार त एकाध घटना हुन् जो आक्कल झुक्कल आउने गर्छन् , यस्ता घटना नेपाल अधिराज्यभर कति घटेको छ यसको लेखा जोखा कोही संग पनि छैन । हजारौं घटना हुन्छ , एउटामात्र समाजको अगाडि आउँछ त्यही घटनालाई माध्यम बनाएर समाजको गन्ने मान्ने अधिकारकर्मीहरुले बहादुरीको साथ आफ्नो दुहुनो सोझो पार्ने काम मात्र गर्छन् । तर ६० लाख अमानवीय दलितको मानव भएर बाँच्ने अधिकार जहाँको त्यही रहन्छ , नत सरकारले भएको कानुनलाई सशक्त तरिकाले लागू गर्छ , नत समाजको गन्ने मान्ने अधिकारकर्मीले मुद्दालाई अन्र्तराष्ट्रियकरण नै गर्न सक्छन् ।
आखिर हामी कहिले सम्म अमानव पशु सरहको जीवन जिउने नेपालको ६० लाख दलित समुदायले ? अब आफ्नो अधिकारको बारेमा केही गर्ने बेला आयो । अब जागौ अब पनि जागेनौ भने समय ढिलो हुनेछ , २१ औ शताब्दीमा पनि अमानव पशु भएर होइन , मानव भएर बाँच्नलाई अधिकार खोजौ ।
– See more at: http://dalitonline.com/archives/18071#sthash.FcWpPtx8.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य on December 20, 2016 .
← दलितलाई बोक्सी देख्नेहरु	ब्राह्मण महिलासँग प्रेम सम्बन्ध राखेको आरोपमा दलित वृद्धलाई गाउँ निकाला →